ကြယ်ပြာ| September 4, 2012 | Hits:7,557
5 | | စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နယ်သို့ ရေဘေး အကူအညီအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျပ် သိန်း ၂၀ သွားရောက် လှူဒါန်းစဉ် (ဓာတ်ပုံ – News and Information Department of NLD / Facebook)
ဟံသာဝတီ ကားပွဲစားဝင်း ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီ
ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲသဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် လယ်သမားများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment kyarlahulay September 4, 2012 - 5:37 pm	ဒုက္ခရောက်တုန်းကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပေါ့။အခုလိုလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူတွေကများ
Reply	တရားဥပဒေမျှတစွာစိုးမိုးပြီး။တိုးတက်စေချင်သူ September 4, 2012 - 6:29 pm	ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ပေါ်ပျူလာဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ.အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အရမ်းမခံမရပ်နိင်မှလုပ်ရတဲ.အလုပ်မျိုး။သူများလုပ်တ်ုင်းလျှောက်မလုပ်ကြနဲ.။ခေါင်းသုံးကြပါ။အခွင်.အရေးပေးလိုက်တာနဲ.ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတာရေးတွေးနေတယ်။အားနေတယ်ဟုတ်လားမြနတ်မာပြည်ကဆန္ဒပြတဲ.လူတွေရေ။ခေါင်းသုံး။အစိုးရကိုလည်းကိုချင်းစာ။အစိုးရကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးပြီးလာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေပျောက်ပြီးနိင်ငံချစ်တဲ.စိတ်ရှိအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါလို.တောင်းဆိုပါရစေ။စာတယ်ဇင်းတွေလွတ်လပ်ခွင်.ပေးလိုက်ပြီးဆိုပြီးပေါက်တတ်ကရတွေလျှောက်မရေးနဲ.ဦး။အားလုံးကလွတ်လပ်ခွင်.လိုချင်တယ်ဟုတ်လား။စည်းကမ်းရှိမှတိုးတက်မယ်ဆိုတာအေးချမ်းမယ်ဆိုတာမမေ.ကြနဲ.။ကိုပိုင်သတင်းစာထုတ်ချင်နေတယ်လို.တွေ.နေရတယ်။ဘယ်နှစ်စောင်ထုတ်နိင်မလဲစောင်.ကြည်.ရအောင်။စီးပွားရေးသမားတွေသတိနဲ.လုပ်ကြ။ထင်.ကနဲဆိုဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မယ်ချည်းပဲ။ကြည်.လုပ်ကြ။ခေါင်းသုံး။
Reply	Seng Lawn September 4, 2012 - 6:30 pm	Myanmar is just Myanmar……. any different ????
Reply	NUTKHAUNG September 4, 2012 - 6:41 pm	လူတွေဟာ လူတွေပါပဲ ။
Reply	snow September 4, 2012 - 7:34 pm	ပြေလည်အောင်ပွင့်လင်းပြောဆိုညှိနှိုင်းကြပါ။
Reply	shwe September 4, 2012 - 7:51 pm	NLD, please be united.Unity is strength.I feel sad to hear that.
Reply	အမှန်တရား September 4, 2012 - 11:31 pm	အန်အယ်လ်ဒိက ဝေဖန်ပိုင်းခြားသင့်ပြိ
Reply	MinThuRa88 September 5, 2012 - 12:53 pm	true……
Reply	Zaw m win September 5, 2012 - 6:53 am	အကွဲ အပြဲ ကတော့ စချင်ပြီ နဲ နဲ မစော ဘူးလား ပါ တီတွင်း ပြသနာ ကို လမ်း ပေါ် ထွက် တာ လုံးဝ မှားတယ် ဒီမိုကရေစီ မှာ စည်း ရှိတယ် လုံးဝ. လုံးဝ စည်းဖေါက်ခွင့် မရှိဘူး ပါတွင်း ပြသနာ ပါတီတွင်း မှာဘဲ ရှင်းပါ ဒီလုပ်ရပ်သည်ကျွန်သက် ဆက် လိုသူတွေ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်.
Reply	Zaw m win September 5, 2012 - 7:38 am	မှန်တယ်ဟေ့
Reply	kyawnyunt September 5, 2012 - 9:02 am	နွားကွဲရင်ကျားဆွဲမယ်။သတိထား။ဒိုင်စားသွားမယ်။ကျားကချောင်းနေတာအကွက်ဝင်တာနဲ့ အုပ်မှာဘဲ။အခုဘောင်းဘီချွတ်တဲ့သမတ။အချိန်မရွေးစစ်တပ်ကသိမ်းလို့ရတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံ ကိုပြန်လေ့လာကြအုံး။ဒီအတိုင်းဆို—————ရင်လေးတယ်။
Reply	မမ September 5, 2012 - 9:49 am	NLD ပါတီဝင်များသိစေချင်ပါသည်။NLDပါတီကိုကျွန်မတို့မဲပေးခဲ့ခြင်းသည်ပါတီဝင်
Reply	thihamin September 5, 2012 - 11:51 am	၁၉၈၉ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ စဖွဲ့ပြီးအတန်ကြာတော့ စကားတခုထွက်လာတယ်၊ ခမောက် ထဲ မြွေဝင်ခွေတယ်ဆိုတာလေးပါဘဲ။
Reply	မေကျော် September 5, 2012 - 11:56 am	ထစ်ခနဲဆိုဆန္ဒပြခြင်းသည် ကောင်းသောအကျင့်စရိုက်မဟုတ်ပါ ပြေလည် အောင်
Reply	alfreadyoung September 5, 2012 - 12:28 pm	NLDဗဟို၇ုံးချုပ်မှာခန့်ထားတဲ့ရုံးအဖွဲ့၊ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့စတာတွေကိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပြန်ပြီး
Reply	pn wara September 5, 2012 - 1:51 pm	မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာကို အဖွဲ့ ချုပ်မှ လိုက်နာစောင့်ထိန်းတာကောင်းပါတယ်။ မြန်မာတွေ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ ရောက်ရောက် နေရာလုမယ်- ညီညွတ်မှူမရှိဘူး။ ပြောတော့ ပြည်သူ့ အတွက် လူထုအတွက်လို့ မိုးမွှန်အောင် – ပါးစပ်က အမြှုပ်ထွက်အောင် ပြောကြမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့နင်လား ငါလား ဘာမှ မထူးပါဘူး။ ဟူး စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါဘိ။
Reply	Khine Yae Htat September 5, 2012 - 3:22 pm	Beware of democracy dictator!
Reply	wai lin han September 17, 2012 - 6:15 pm	ကြားရတာတွေကလည်း ရင်မောစရာတွေချည်းပါပဲလား။ တပ်မတော်မိသားစုအတွင်းမှာ မွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်တော့အတွက် အစကတည်းက နိုင်ငံရေးကိုကြောက်ခဲ့တဲ့သူအတွက်အခုကြားနေရတာတွေက ကြောက်စရာတွေပါ။ ဆင်ခြင်ကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ သခင်အုပ်စု၊ ဦးဗိုလ်အုပ်စု စတဲ့အကွဲအပြဲခေတ်တွေကို နောက်ပြန်မဆွဲကြပါနဲ့တော့။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေ ရနေတဲ့ အခြေခံလစာ တရက် 10$ ဆိုတာတွေလည်းရှိလာဖို့ကဘယ်အချိန်ထိ စောင့်နေရဦးမှာလဲ။ အမိမြေကို သတိရလွန်းလို့ပြန်လာချင်လှပါပြီ။ပြန်ချင်ပေမယ့်လည်း မပြေလည်တဲ့မိဘတွေရဲ့ မျက်နှာကြောင့်ကြိတ်မြိတ် နေရဦးမှာပါ။လက်ရှိ စွမ်းဆောင်နေသူတွေကို အားကိုးယုံကြည်ချင်ပါတယ်။ပြည်သူ့မျက်နှာတစ်ခုတည်းကို ပဲကြည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာဖြစ်ရတာကို ထာဝရဂုဏ်ယူနေသူပါ။